BREAKING- काठमाडौ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमण धेरै बढेपछी सरकारले भर्खर जारी गर्‍यो आकश्मिक सुचना ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/BREAKING- काठमाडौ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमण धेरै बढेपछी सरकारले भर्खर जारी गर्‍यो आकश्मिक सुचना !
BREAKING- काठमाडौ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमण धेरै बढेपछी सरकारले भर्खर जारी गर्‍यो आकश्मिक सुचना !
काठमाडौ उपत्यकामा फेरी एक साताका लागि निषेधाज्ञा थपिएको छ । मंगलवार तीन जिल्लाका सिडिओको भर्चुअल बैठकले निषेधाज्ञा थप एक साता बढाउने निष्कर्ष निकालेसंगै बुधवार गृहमन्त्रालयसंगको छलफल पछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
काठमाडौमा कोरानो संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम नरोकिएपछि जारी निषेधाज्ञा थप एक साता लम्ब्याउने निर्णय गरिएको हो । उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गृह मन्त्रायलसँग छलफल गरेपछि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेका हुन् । तर, निषेधाज्ञाको मोडालिटि भने केही फरक बनाइएको छ । अत्यावश्यक संगै उपभोग्य बस्तु सम्बन्धि सेवा दिनेहरुलाई पनि खुला गरिएको छ । होम डेलिभरी लगायतका सेवा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि भएको छ । एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार त्यसबारे केहीवेरमा सूचना जारी गरेर जानकारी गराइनेछ । ३ भदौंदेखि लगाइएको निषेध आदेशको आजदेखि सकिँदै थियो। **** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****
औषधि, खाद्यवस्तु र अत्यावश्यकीय वस्तु खरिदमा यसअघि पनि रोक लगाइएको थिएन । तर बाहिर निस्कदा स्वास्थ्य सजगता भने अपनाउनुपर्ने नियम लागू भएको थियो । माक्स नलगाई बाहिर निस्कन नपाउने नियम लागू भएको हो । होटल, रेष्टुरेन्ट, फुटपाथ पसल अझै बन्द हुनेछन् । बैंक लगायतका निकायले न्यूनतम कर्मचारी राखेर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी सेवा दिन सक्नेछन् । तर, १० भदौमा पुनः ७ दिनका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय भएको थियो । जुन बुधबार मध्यरातिबाट सकिँदैछ । तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बुधबार सम्पन्न भर्चुअल बैठकले निषेध आदेश एक हप्ता थप गर्ने निर्णय गरेको एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए।
त्यस्तैगरी लकडाउन मात्र कोरोना नियन्त्रणको विकल्प होइन, अर्थतन्त्र डामाडोल भइसक्यो लकडाउन र निषेधाज्ञा खुलाउन भन्दै ब्यवसायीले माग गरिरहेको बेलामा उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमले कर्फ्यु आदेश जारी गर्न सुझाव दिएको छ । फोरमले निषेधाज्ञालाई सर्वसाधारणले अटेरी गरेको भन्दै कर्फ्र्यु लगाउन माग गरेपछि ब्यवसायीहरु रुष्ट भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा निषेधाज्ञा कडाई गर्न र कर्फ्यु लगाउन माग गर्ने सिडिओ विरुद्ध निकै कडा विरोध आएको छ ।लामो समय देखिको निषेधाज्ञाले ब्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाएर आर्थिक नोक्सानी भोगीरहेका ब्यवसायीहरु सिडिओको यस्तो सुझावले रुष्ट भएका हुन् ।सामाजिक सञ्जालमा व्यवसायीहरुले मेयरहरुको सेवा सुविधा रोकेर कर्फ्यु आदेश गर्न सुझाव दिएका छन् ।
कसमस सिमेन्टका कार्यकारी निर्देशक प्रबलजंग पाण्डेले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘१५ दिन कर्फ्यु लगाउन सुझाव दिने नगरपालिका फोरमले अघिल्लो १४ दिनको सटडाउनमा कोभिड नियन्त्रणमा के गर्यो र १५ दिन कर्फ्यु लगाउँदा के गर्ने भनेर योजना जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेको भए हुने थियो। दायित्व पूरा गर्न नपरेपछि जे बोले पनि भयो नि।’ उनको यो स्टटासमा थुप्रै ब्यवसायीले समर्थन गर्दै आफ्नो धारणा लेखेका छन् । त्यस्तै उनको त्यो स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष विप्लवमान सिंहले भनेका छन्, ‘यिनीहरू पागल हुन्। यिनीहरूको तलबभत्ता पनि रोक्नुपर्छ। अनि थाहा हुन्छ लकडाउन के हो भनेर।’